အယ် ……….. ဟင်းရည်တောင် မထည့်ရသေးဘူး … နှစ်ပွဲတောင်းတဲ့ သူနဲ့ ၊ ဟင်းရည်ဇလုံကြီးကို လက်က မချသူနဲ့၊ မနားတမ်း ဟင်းရည်ထည့်ရသူနဲ့၊ ကိုနာလီဇာ အပြူံးလေးတွေနဲ့ အားကျလိုက်တာနော် ………. :D
အဲဒါ ဘူဒုံး … ဟင် .. :D
အဟေ့ .. :D
ဂျာနယ်လှစ် တွေက တချိန်လုံးချောင်းနေတော့တာ ပဲ ………. မင်းရဲမော်တိုက်ကွန်းလေး စိတ်ညစ်တယ်.. ခိခိခိ :D